उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : के हुँदैछ २१ गतेको बैठकमा ? | Kendrabindu Nepal Online News
31850128 976559 7423662 23449907
उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : के हुँदैछ २१ गतेको बैठकमा ?
१९ श्रावण २०७७, सोमबार १४:५५
साउनको अन्तिम साता तोकिएको उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा तथा निर्वाचनको मिति सरेपछि महासंघका किचलो भएको छ ।
कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले धेरै जना भेला गर्न र सभा सम्मेलन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही कारण देखाउँदै महासंघले पूर्व अध्यक्षहरु डाकेर छलफल गरी निर्वाचनको मिति पुनः सारेको थियो । महासंघले निर्वाचनको मिति सारेपछि असन्तुष्ट बनेको चन्द्र ढकाल समूहले निर्वाचन गराउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
महासंघले आगामी २१ गतेका लागि पुनः कार्यासमिति बैंठक डाकेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन पटक पटक सरेपछि यस विषयमा छलफल गर्न वैठक डाकेको महासंघले जनाएको छ । सरकारले कोरोनाका कारण चैत ११ गते देखि लकडाउन गरेपछि चैतको अन्तिम साता हुने भनिएको महासंघको निर्वाचन साउनमा गर्ने गरी स्थगित भएको थियो ।
महासंघको विधान अनुसार महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अहिले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा छन् । उनी स्वतः अध्यक्ष हुँदैछन् । महासंघको चुनावमा मूख्य प्रतिस्पर्धा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हुने गर्छ । जुन पदका लागि आकांक्षीहरुले चर्काे प्रतिस्पर्धा पनि गर्दै आएका छन् । यसपटक उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा उत्रिँदैछन् । उपाध्यक्षद्वय ढकाल र प्रधानवीचको चुनाव निकै रोचक हुने बताइएको छ । उनीहरूले औपचारिक रुपमै उम्मेद्वारी घोषणा गरेर प्रचारप्रसार तथा भेटघाटलाई तीव्र बनाएका थिए । व्यवसायी ढकाल जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष गुणनिधी तिवारी, एसोसियट उपाध्यक्ष, रामचन्द्र सांघाई, बस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसहित उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् ।
त्यस्तै,अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार किशोर प्रधान एशोसियट उपाध्यक्ष सौरभ ज्योति, बस्तुगत उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले प्यानलसहित उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै प्रचारप्रसार गरेर नीजि क्षेत्र तातेको भए पनि अब भने केही समय सेलाउने देखिएको छ । नयाँ मिति नतोकिँदासम्म महासंघको निर्वाचन अन्योल नै देखिन्छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन
Prevसुनमा कोरोना असर : मूल्य बढेको बढ्यै, कारोबार शुन्य
विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशतमाथिNext
उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचन : वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जित्ने ढकाल र प्रधानको आ–आफ्नै दाबी
कैदीबन्दी जैसवालको मृत्यू शंकास्पद नभएको कारागारको प्रष्टिकरण
गायिका भट्टराईको 'तिमी बिना' सार्वजनिक (भिडियो)
कोरोना जितेकाहरूको ‘प्लाज्मा दान’ अभियान (भिडियोसहित)
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
अमृत ब्राण्डका १४० कार्टुन तेल साबुन कम्पनीमा पठाउन निर्देशन